ESI ERE AHỊA NA STEAM - STEAM - 2019
Na-ere ihe na Steam
Na BIOS, ị nwere ike ịtọ paswọọdụ maka nchebe ọzọ nke kọmpụta, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ịnweghị ka mmadụ nwee ike ịnweta os site na iji usoro ntinye bụ isi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chefuo paswọọdụ BIOS, ị ga-achọrịrị weghachite ya, ma ọ bụrụ na ị nwere ike kpamkpam ịnweta kọmputa.
Ọ bụrụ na echefuru paswọọdụ BIOS, o yighị ka ọ ga-agbake ya dị ka paswọọdụ Windows. Iji mee nke a, ị ga-eji usoro ọ bụla maka ịtọgharị ntọala niile, ma ọ bụ ntinye aha okwuntughe pụrụ iche nke na-adịghị adaba maka nsụgharị na ndị mmepe.
Usoro 1: jiri paswọọdụ injinia
Usoro a mara mma karịa n'echiche na ịkwesighi ịtọgharịa ntọala BIOS niile. Iji chọta paswọọdụ injinịa, ịkwesịrị ịmara isi ihe gbasara usoro I / O gị kachasị elu (na opekempe, mbipụta ahụ na emeputa).
Gụkwuo: Otu esi chọpụta nsụgharị BIOS
Ịmara ihe niile dị mkpa, ị nwere ike ịnwa ịchọta ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta nke motherboard maka ndepụta nke okwuntughe engineering maka version BIOS gị. Ọ bụrụ na ihe niile dị mma ma ịchọta ndepụta nke ederede okwunyere kwesịrị ekwesị, wee tinye otu n'ime ha kama nke gị, mgbe BIOS na-arịọ ya. Mgbe nke ahụ gasịrị ị ga-enweta ohere zuru ezu na usoro ahụ.
O kwesiri icheta na mgbe ị na-abanye na paswọọdụ engineering, onye ọrụ ahụ nọgidere na ya, n'ihi ya, a ga-ewepụ ya ma debe ihe ọhụrụ. Ọ dabara na, ọ bụrụ na i nweela ike ịbanye na BIOS, mgbe ahụ ị nwere ike ịtọgharịa na-enweghị ọbụna ịmara paswọọdụ ochie gị. Iji mee nke a, jiri ntụziaka a site na nkwụsịtụ:
Dabere na mbipute ahụ, ngalaba a chọrọ - "BIOS Isetịpụ Paswọdu" - nwere ike ịbụ na ibe ma ọ bụ na paragraf "Nchebe".
Họrọ ihe a, wee pịa Tinye. A windo ga-apụta, ebe ị ga-achọ ịbanye paswọọdụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị gaghị etinyekwu ya, wee hapụ akara ahụ ma pịa Tinye.
Ọ bara uru na-echeta na, dabere na mbipụta BIOS, ọdịdị na ihe odide na ihe ndị ahụ nwere ike ịdị iche, ma n'agbanyeghị nke a, ha ga-enwe ihe ọ pụtara.
Usoro 2: zuru nrụpụta
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta paswọọdụ injinịa ziri ezi, ị ga-enwerịrị ụdị "usoro" dị otú ahụ. Ihe kachasị mma ya bụ na tinyere paswọọdụ ntọala niile a ga - eji aka gị weghachite.
Enwere otutu ụzọ iji weghachite ntọala BIOS:
Wepụ batrị pụrụ iche site na motherboard;
Iji iwu maka DOS;
Site na ịpị bọtịnụ pụrụ iche na motherboard;
Ikwunye kọntaktị CMOS.
Hụkwa: Otu esi edozi ntọala BIOS
Site na itinye paswọọdụ na BIOS, ị ga-echebe kọmputa gị site na nbanye na-enweghị ikike, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nweghị ozi bara uru na ya, ị nwere ike itinye paswọọdụ naanị na sistemụ arụmọrụ, ebe ọ bụ na ọ dị mfe iji gbakee. Ọ bụrụ na ị ka kpebiri ichebe BIOS gị na paswọọdụ, jide n'aka na ị ga-echeta ya.